ညီမျှခြင်းနဲံတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ ပေါင်းစည်းမှု | LLCO - အလင်းရောင် ကို ဆောင် ကျဉ်းပေးလာသော ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့အစည်း
ညီမျှခြင်းနဲံတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ ပေါင်းစည်းမှု
ချမ်းသာတဲ့နိင် ငံများရဲ့ ဘဝကို လွယ်ကူ အဆင် ပြေစွာနေ ထိုင် နိင် တဲ့လက်တစ်ဆုပ်စာ
အလုပ် သမား များကို ပြောပြဖို့ ရန် နယ်ချဲ့ဝါဒိများဟာ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်
အဲဒါဟာ သူတို့ တွေဟာ ကြီးမားသော ဆင်း ရဲမွဲတေ ခြင်းကို ကြောက် ရွံ နေ တဲ့ အဲဒါဟာ တန် ပြန် တော်လှန် ရေးပါ
အဲဒါဟာ ကျွန်တော်တ်ု့ ကို ပြောပြဖို့ ရန် နောက် ဆုတ် နေပါတယ် အထက်တန်းလွှာမှာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု ရဲ့ ကြောက် ရွံ့မှု အရမ်းဆင်းရဲ မွဲတေ မှု ရဲ့ ကြောက် ရွံ့မှု တော်လှန် ရေးရုန်းကန်လှုပ် ရှားမှု အတွင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ ပါတီမှာ မပိုင် ဆိုင် နိင် ပါဘူး အဲဒါနည်းအ နေ နဲံ အာဏာရှင် အစိုးရဟာ မဖြစ်နိင် ပါဘူး အထူးသဖြင့် အ နောက် ဥ ရောပ နိင် ငံတွေမှာ အာဏာရအစ်ိုးရဟာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိင် ပါဘူး
VI လီိနင် ရဲ့နိင် ငံတကာ ကွန်မြူနစ် ထဲသို့မြောင်းပေါက် ဖြစ်ပါတယ်
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကုို ယူ ဆောင် ရာမှာ
မြောက် အ မေရိက နဲ အ နောက် ပိုင်းဥ ရောပ ဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ မြို့ကြီးများဟု ခေါ်ဆို နိင် ပါတယ် ထို့နောက် အာရှနဲံ အာဖရိက
လက် တင် အ မေရိက တို့ ကို ကမ္ဘာ့ကျေးလက် ဒေသလို့ ခေါ်ဆို နိင် ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ကတည်းက
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစား တော်လှန် ရေးလှုပ် ရှားမှုဟာ များစွာ သော အ ကြောင်းပြချက် အတွက် ယာယီခန မြောက် အ မေရိကနဲ့
အ နောက် ဥ ရောပ အရင်းရှင် နိင် ငံများက
အာရှမှာရှိတဲ့လူတွေ ရဲ့ တော်လှန် ရေးလှုပ် ရှားမှုကို အာဖရိကနဲ့လက် တင် အ မေရိက နိင် ငံများဟာ ကြံ့ခိုင် စွာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ် အပို အ နေ နဲ့
မျက် မှောက် ခေတိ ကမ္ဘာ့တော်လှန် ရေး
ဟာ မြို့ကြီးများကို ကျေးလက် တောရွာများက ဝိုင်းရံခြင်းရဲ့ ပန်းချီကားတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆုံးလေ့ လာ တွေ့ရှိချက် အရ ပထမကမ္ဘာနဲ့ တော်လှန် ရေးရဲ့ အာရှ အာဖရိက လက် တင် အ မေရိကန်သားတွေရဲ့ လှုပ် ရှားရုန်းကန် မှု ဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ချုပ် ကိုင် ထားမှုကို ပိတ် ဆို့ထားပါတယ်
( လင် ဘိုင် အို ရဲ့ ရှည်ကြာသော ပြည်သူ့စစ် ပွဲ)
မော် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပထမ ရှစ်လုံးဟာ ဘယ်သူက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရန်သူတွေလဲ? ဘယ်သူတွေက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့မိတ် ဆွေ တွေလဲ?မက်စ်ဝါဒီ တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာ ရှင် မက်စ်ဟာ ကွန်မြူနစ် ဝါဒသို့ရောက် ရှိ စေဖို့ ရန် သိပံ္ပ စာ မေးပွဲကို အ ထောက် အကူပြုပါတယ် ပြီးတော့ ကွနိ် မြူနစ် ဝါဒဟာ လူသားလွတ် မြောက် ရေး
ဖိနိ်ပ်ချုပ်ချယ်မှု အားလုံးရဲ့အဆုံးသတ် ထက် လျော့နည်းစရာ မရှိပါဘူး မော်ဟာ သူငယ်ချင်း တွေ ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို အ ရေးကြီးမှု ရဲ့
မေးခွန်း ဝေဖန် မှုများကို ခေါ်ခဲ့ပါတယ်
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဟာ အဲဒီ မေးခွန်းကို မှန် ကန် စွာ မ ဖြေဆို နိင် လျှင် အရာအားလုံးဟာ
မဖြစ် နိင် ပါဘူး လေ့လာ တွေ့ ရှိချက် တစ်ခု ဟာ ပိတ်လိုက် ရင် ကွန်မြူနစ်တော်လှန် ရေးကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန် ရေးရဲ့ အမြင် ဟာ ဘာမှအဓိပ္ပာယ် မ ရောက်ပါဘူး အဲဒီမှာထင် ယောင် ထင် မှား
အိမ်မက်များသာ ရှိပါတော့တယ် တော်လှန် ရေးအတွက် ပစ္စည်းမဲ့ အ ခြေ ခံတွေကိုနားလည် ထားခြင်းတစ်ခုသာ စစ်မှန် သော လေ့လာတွေ့ ရှိချက် အပိုင်းတစ်ခုသာ လျှင် ဆို ရှယ်လစ် စနစ်တည် ဆောက် ရန်
ကွန်မြူနစ် စနစ်ကို ရှေ့ဆက် ဖို့ ရန် ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားတွေ စွမ်းအင် ဝင် ရောက် နိင် ဖို့ ရန် လုံလောက် သော ဆုိုရှယ်လစ် အားများရ ရှိစေနိင် ပါတယ်
နယ်ချဲ့ ကို ဆန့်ကျင် ဖို့ နဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ကို အကြိုက်ဟာ ဘယ်သူဟာ စု ပေါင်းထားနိင် လဲ မစု ပေါင်းထားနိင် လဲဆိုတာ နားလည်ထားရှ်ိ ဖို့ ရန် အဲဒါဟာ ဘယ်သူက ဆို ရှယ်လစ် ဝါဒ အောက် မှာ အလုပ်ဖြစ်သလား ဘယ်သူက အလုပ် ဖြစ်သလဲ ဆိုတာကို မေးဖို့ ရန်လို အပ်ပါတယ်
အဲဒီဆို ရှယ် အ တွေးက ဆို ရှယ်လစ်ဝါဒီ တွေမှ တော်လှန် ရေးရဲ့ဘက်မှာ ကျဆုံးဖို့အကျိုးရှိ စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ် အဲဒါ အ ခြေ ခံ သ ဘောတရားပါ
တချို့အဓိပ္ပာယ် တွေမှာ လူတိုင်းက ကွန်မြူနစ်ဝါဒီလက် အောက် မှာ အကျိုးအမြတ် ရ ရှိကြပါတယ် အဆုံးစွန် ဆုံးကွန် မြူနစ် ဝါ ဒီအောက် မှာ ဘဝဟာ
လူတိုင်းက စိတ်ချမ်းသာပြီး ပိုမိုကျန်းမာအသက် ရှည်နိင် ပါတယ် တန်ပြန် တော်လှန် ရေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အဖွဲ့ဝင် တွေ တောင် ဖြစ်နိင် ပါ သေးတယ် အရင်း ရှင် ဝါဒီရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အဖျက်အဆီးများဟာ
အရမ်းကောင်းမွန် ပြီးအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု အ နေ နဲ့ လူတိုင်းဟာ အတိုးနှန်းအရှည်ကို ထောက် ပံ့ပေးဖို့ ရန် ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီ ဝေးကွာတဲံအနာဂတ်မှာ အစ်ိတ်အပိုင်းတွေဟာ ရပ်စဲခဲံပြီး နောက်ပိုင်းတည်ဖို့ ရန် ရပ်စဲခဲ့ပါတယ်
လူတိုင်းနီးပါး အကျိုးအမြတ် ရ ရှိပါတယ် လူတိုင်းဟာ ကွန်မြူနစ် ဝါဒ အောက်မှာ အရှည်ကြာကြာ အကျိုးအမြတ် ရှိ ရုံသာမက ရေတ်ိုမှာလည်း အများစုကလည်း ဆုံးရှုံးမှုဟာ ကုန်ဆုံ့းတော့မှာပါ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဟာ ချမ်းသာမှုနဲ့စွမ်းအင် က်ု ပြန်လည်ထုတ်ဝေ
ရပြီးတော့အစစ်အမှန် ကမ္ဘာမှာ အဲဒါတွေဟာ အဆုံးရှိပြီး အကန့်အသတ်
ရှိပါတယ် အဲဒါဟာ ချမ်းသာမှု နဲ့ ဆင်းရဲတဲံ့
ကမ္ဘာဝင် တန်းကို စုပေါင်းခြင်းးက်ို ကာကွယ်ဖို့ ရန် စစ်မှန် သောဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်
စစ်မှန်သော ကမ္ဘာဟာသ ဘောထားကွဲလွဲ
မှု ရဲ့ တစ်ခု ပါ အခြားစကားနဲ့ဆို ရင် တော့
ကျွန်တော်တို့ဟာ မြေထဲပင် လယ် နိင် ငံအပိုင်းများကို သူတို့အခု လက် ရှိတည် ရှိ နေတဲ့နေ ရာလို ရှေ့တိုးရမယ် အဲဒါဟာ ဘာ့ ကြောင့်လဲဆို တော့ ဓန ရှင် လူတန်းစား ရဲ့ ရောင်းဝယ် ဖောက် ကားမှုဟာ ဆယ်စုနစ်တစ်ခုကို ဖြတ်လျှက်ကျွန်တော့်ိကု သူ့ကို
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားတစ် ယောက် ဖြစ်ခဲ့သလ်ို
ယ နေ့ မေ့ မ ရတဲံ အဓိပ္ပာယ မဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့အ နေ နဲ့မြေထဲပင် လယ်နိင် ငံ တွေက်ု ရှေ့ဆကိ တိုးရမယ်
အချို့ နေ ရာ တွေမှာ တော့ ရှေ့ဆက်မတိုးသင့် ပါဘူး
ရိုးရှင်းတဲ့အများစုပီသ ထင် ရှားတဲံ့  ကမ္ဘြာ့ကီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက် တစ်ချက် က တော့ ပထမကမ္ဘာနဲတတိယကမ္ဘာကြားက ကွာခြားချက် ဖြစ်ပါတယ် အရင်းရှင် နယ်ချဲစနစ်ဟာ စွမ်းအင် နဲံ ချမ်းသာကြွယ် ဝမှု ဟာတချို့လူဦးရေ များသို့တခြားလူတွေ ရဲံစရိတ် တွေနဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်
ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနည်းစုသာ အကျိုးအမြတ် ရှိပြီး အများစုက တော့ မ ရ ရှိကြပါဘူး
ဝင် ငွေလိုက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ လေ့ လာကြည့် ရှုတဲ့ခါ လူဦးရေ တွေကု ဖြတ်ပြီး
ကျွန်တော်တို့ ဟာချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ ချမ်းသာတဲံသူမဟုတ်တဲ့သူတွေ ရဲ့ အာရုံခံစားမှုကို ရ ရှိပါတယ် အဲဒါတွေအကုန်လုံးအပြီးမှာ ဝင် ငွေက အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အဆက် အသွယ် ရှိပြီး တခြားချမ်းသာ သောညွှန်းသောကိရိယာများနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်
ဝင် ငွေကို လေ့လာကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကို တစ်ကမ္ဘာလုံး အ နေ နဲ
ဘယ် လောက် ချမ်းသာ နေသလဲဆိုတာ အဖြစ် ပေးပါတယ် ချမ်းသာမှုနဲ့စွမ်းအင် ဟာ ဆက်စပ်တဲ့ နေ ရာမှာလျှို့ဝှက်ချက် ရှိပါတယ် ဆိုရှယ် အုပ်စု တွေဟာ ဒီထက် ပို ချမ်းသာ စေချင် ပြီး ဒီထက်ပို စွမ်းအင် ရှ်ိသလို ဒီထက် ပို ဆင်း ဆငိး ရဲရဲနဲ့ လျော့နည်းဖို့ဂရုစိုက် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဝင် ငွေ ထုတ် ဝေဖြန့်ဖြူးခြင်းဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအ နေ နဲံ ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြငိ့
ဒီဟာက ကျွန်တော်တု့် ကို ကြီးမားတဲ့
ဓာတ်ပုံတစ်ခု ရှိပါတယ် ပထမကမ္ဘာအလုပ်သမားကိစ္စဟာ ကမ္ဘာရဲ့
ဆကိ သွယ်ချက် မှာ ရပ်တည် နေတာဖြစ်ပါတယ်
ကမ္ဘာ့ ဝင် ငွေများမညီမျှပါ လျှင် ဘာနဲ့တူလဲဆိုတာ ပြဖို့ 
လက် တွေ့ခန်းအ တွေ့း ကို သုံးကြပါစို့ 
အဲဒါဟာ ဆို ရှယ်လစ် ဝါဒီဟာ ဒီထက် ပိုပြီးလေးနက်တဲံ့ပုံစံ ပြောင်းလဲနိင် ပါတယ်
အဲဒါက ဝင် ငွေ အ ပေါ် သာနေသလို ဖြစ် နေ ပါတယိ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အ တွေးအ ခေါ်ဆိုင် ရာ လက် တွေ့ခန်းဟာ ကျွန်တော်တို့ ကိုနယ်ချဲ့ဝါဒီ အလုပ် ဖြန့်ဖြူမှုနဲ့ အဲဒါ မဟုတ် တဲ့ အရာမှ လူဦးရေ ရဲ့ အာရုံခံစားမှုဟာ အကျိုးအမြတ် ရ ရှိ နေ တာကို ပေးမှာပါ အ မေရိကန် ကအလယ် အလတ် ဝင် ငွေဟာ အိမ်ထောင် စုဝင် တစ်ယောက် ရဲ တစနစ်ပတ်လုံးဝင် ငွေဟာ အကြမ်းအားဖြင့်
၁၉၄၀၀ ဒေါ်လာ ရှိပါတယ် ဝင် ငွေဟာ လုပ်အားခများသက်သက် မဟုတ်ကြပါဘူး
ဒါ ပေမယ့် အဲဒီထဲမှာ အလုပ်မလုပ်မှု အတွင်း ငွေ ပေးချေ ခြင်း လူမှုဖူလုံ ရေး
ငွေ ကြေးပေး ချေ ခြင်း မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်း
က လေးလေးများကို ထောက် ပံ့တဲ့ ငွေ ကြေးချေ ခြင်း သာမန်အလုပ်သမားများ
အများအားဖြင့် မည့်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် ရေးရာစီမံမှုများကို ရင်းနီးမြှုပ် နံခြင်းဒါမှ မဟုတ် ဝင် ငွေ ရဲ့အခြားအမျိုးအစားများဟာ
လုပ် ရိုးလုပ် စဉ်အတိုင်း လက် ခံ ရ ရှိ နေ ပါတယ် ပုံမှန် အ မေရိကန် တစ် ယောက် ဟာ အသက် ၁၈ ဒါမှမဟုတ်
အသက် ၁၈ ထက် ပိုကြီးတဲံသူဟာ တစ်နစ်ကို
အ မေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၂၀၀၀ ရ ရှိနိင် ပါတယ် အ မေရိကန် ပြည်ထောင် စုမှာ ရှိတဲ့မည်သူမဆို တစ်နာရီကို ဒေါ်လာ ၇.၂၅ ရဖို့ မခက်ခဲဘဲပုံမှန် ဖြစ် နေပါတယ် အပြင် အလုပိ တွေ ဥပမာအ နေ နဲ့  စက် ရုံအလုပ်သမားများဟာတစ်နာရီ့ကို ၁၀ ဒေါ်လာ
သို့ မဟုတ် ၁၀ ဒေါ်လာထက် ပို မ်ို ရ ရှိကြပါတယ် အလွန် အနည်းငယ်သော
အဲဒီလစာ ဟာ ရှားပါးတဲ့ သီးခြား အနည်းငယ်
လုပ်အားဟာ အ မေရိကန်ပြည်ထောင် စုမှာ ရှိတဲံ့  တစ် နေကုန် အလုပ်လုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နစ်မှာ
တစ်ကမ္ဘာလုံးအားဖြင့် တစ်နစ်ကို ဒေါ်လာ
၁၅၀၀၀ ဒေါ်လာ ရပါတယ် အပို အ နေ နဲ့
သူ့မှာ ဝင် ငွေ တွေတိုးဖို့လည်းရှိပါတယ်
အ ပေးအယူ အ နေ နဲ့ အလယ်အလတ်တွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအ နေ နဲ့ တစ်နစ်ကို ၈၅၀ ဒေါ်လာ ရ ရှိပါတယ် တတိယကမ္ဘာရဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ နိင် ငံများရဲအများစုဟာ ဒေါ်လာ သုံးဒေါ်လာ
တောင် မ ရ ရှိကြပါဘူး တတိယကမ္ဘာမှာ ရှိတဲ့လူသားဆန် မှုဟာ လူသားဆန် မှု ရဲ့အများစု ဟာ အသက် ရှင် ကျန် ရစ် နေ ရုံ့သာ ရှိပါတယ် အဲဒီတူညီမျှမှု ကမ္ဘာကြီးရဲ့စီးးပွား ရေးကို အုပ်ချုပ်လိုက်လျှင်
အဲဒါနဲ့တူတာ ဘာရှိမလဲ? ဝင်ငွေ တွေကို
ညီမျှစွာ ထုတ် ပေးထားတဲံ စည်းအောက် မှာ
ဝင် ငွေ တွေဟာ ဘာနဲ့တူမလဲ? လူတိုင်းက ဂလိုဘယ် လူမှု ရေး ထုတ်ကုန်တွေ ရဲ့ မျှ ဝေမှု နှုန်းဟာ ဘယ်လို နေ ရာမျိုးမှာ ညီမျှစွာ
ရ ရှိနိင် မလဲ? ကမ္ဘာ့ရဲ့ ဝင် ငွေဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ကြားမှာ အချိုးကျ ခွဲစိတ်လိုက်မယ်ဆု ရင် လူတိုင်း အကြမ်းအားဖြင့်
၈၀၀၀ ဒေါ်လာ အမည်တင် ခွင့် ရှိပါတယ်
အခြားစကားအ နေ နဲ့ အ မေရိကန်ပြည်ထောင် စု မှာ ရှိတဲ့ ညီမျှခြင်း ရဲ မျှ ဝေမှုဟာ များသောအားဖြင့်
အဲဒီထုတိ ဝေမှု အောက် မှာ စုစု ပေါငါးဝင် ငွေ ရဲ့ အကြမ်းအားဖြင့် ၈၀၀၀ ဒေါ် လာအမည် ခံခွင့် ရှိပါတယ် အ မေရိကန် ပြည်ထောင် စုမှာ ရှိတဲ့  အနည်းဆုံးဝင် ငွေ ဘဲ ရတဲ့လူတောင်
ညီမျှတဲထုတ် ဝေဖြန့်ုဖြူးမှုကို ဆုံးရှုံးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ဆက် လက် ရပ်တည် နိင် ပါတယိ သူတို့ တွေ ရဲ့စု စု ပေါင်းဝင် ငွေ
တစ်ဖကိဟာ ဆုံးရှုံ့းခြင်းကို ဖြစ် ပေါ် စေပါတယ် လူတစ်ယောက်ဟာ ဒုတိယအကျိုးအမြတ် ရဲ့ အမျိုးအစားအားလုံးကို ပထမကမ္ဘာမှာ ရိုးရှင်းစွာ နေ ထိုင် ခြင်းဟာ ကြီးမားကောင်းမွန် သော မိုဘိုင်းအစိတ်အပိုင်း လူထုနဲ့ဆို ရှယ် ဝန် ဆောင် မှုများ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းတည် ဆောက် ထားသော ပိုမို ကောင်းမွန် သောပြည်သူ့ပညာ ရေး
ပိုမို ကောင်းမွန် သော လုံခြုံရေးစသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ် ပထမကမ္ဘာမှ ဆင်းရဲဆုံးအလုပ်သမားတွေ တောင်
ပိုမိုညီမျှ သော စနစ် အောက် မှ အကျိုးအမြတ် ရ ရှိစေ ရန် အလားအလာ မရှိဘဲ အပို အ နေ နဲ တန်းတူညီမျှလို လားသော ထုတ် ဝေခြင်းစီမံချက် ကဲ့သို့ 
စွန့်စားခြင်း ပင် မပြုလုပ်ဘဲ လိုအပ်ချက်များကို ပယ်ဖျက်ကာ သမိုင်းရေးရာ ကုပ်တွယ် နေ ခဲ့ပါတယ် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ ဖွံ့ဖြ်ုးတိုးတက် မှုပင် လျှင် ဖြစပါတယ် ပထမကမ္ဘာကချမ်းသာတဲ့နိင် ငံ တွေဟာ
အဓမ္မရယူခြင်း ရဲံ ရာစုနစ် တွေ စွန့်လွှတ် စွန်စားခြင်း နဲ့တတိယကမ္ဘာ ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု အောက် မှာ အကျိုးအမြတ် ရ ရှိခဲ့ပါတယ်
မှန်ကန်စွာ အ ခြေ အ နေ အရ အပြင် တန်ဖိုးတွေဟာ ဆင်းရဲတဲ့နိင် ငံဆီသို့တိုက် ရိုက် ရောက် ရှိသွားဖို့လို အပ် ပါတယ်
အခြားစကားနဲ့ ပြောမယ်ဆို ရင် တော့ အ မေရိကန် ပြည်ထောင် စုမှာ ရှိတဲ့လူဦးရေ နဲ့ ပထမကမ္ဘာမှာ ရှိတဲ့လူဦးရေဟာ
လျော့နည်းတာကိုအမည် ခံင်္ပြီး တတိယကမ္ဘာကဒီထက် တောင် ပိုလာပါတယ် အဲဒီမှာ စိတ်ကူးယဉ်စီမံကိန်းများကိုပြုလုပ် လို့ လူတွေ ရှိပါတယ် သူတို့ ဟာ ပရိယာယ်မပါဘဲ ပထမကမ္ဘာရဲံ ချမ်းသာကြွယ် ဝမှုဟာ
အဲဒီထုတ်လုပ် မှုအားမျက် လှည့် ခုံများနဲ့
ညီမျှတဲ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး အောက် မှာ
ထိန်းသိမ်းထားနိင် ပါတယ် ပထမဦးဆုံး အ နေ နဲ့ ဆို ရှယ်ထုတ်ကုန်စားသုံးခြင်းဟာ နစ်စဖြစ်ပြီး
အပြင် ထုတ်ကုန်အားလုံးဟာ အောက် ခြေ ၈၀% ဟာ သွားကုန် ရင် ထိပ်ဆုံး၂၀%ဟာ
ပထမကမ္ဘာက နေ ထိုင်ကြသူများ အ နေ နဲ့ အဲဒီဒေသက လူတွေဟာ လဲကျပြီးဒီထက်ပို ကောင်းနိင် ပါတယ် ဒုတ်ယအ နေ နဲ့ ပထမကမ္ဘာစားသုံးမှု နှုန်းနဲ့ ပထမကမ္ဘာရဲ့ ဘဝပုံစံဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆန် ဆန် ထိန်းသိမ်းဖို့ မဖြစ်န်ိင် ပါဘူး ပထမကမ္ဘာဟာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့အနာဂတ်နဲံကမ္ဘာကို သတ် ဖြတ် နေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အ တွေးအ ခေါ် လက်တွေ့ခန်းတွေဟာ ပထမကမ္ဘာ ကလူတွေ တို့ဟာ သူတို့ တွေရဲ့ မျှတထားတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ ဆိုရှ
ယ် လစ် တော်လှန် ရေးထက်ပိုပြီး လက်ခံ ရယူကြပါတယ် သူတို့ တွေဟာ ညီမျှသော သီးသန့် ဝင် ငွေ ရဲ့ထုတ် ဝေမှု ထဲမှာ
သူတို့ဟာ ရုပ်ဝတ္ထု လို အပ်ချက် တွေ မရှိပါဘူး ဆိုရှယ်လစ် ရည်မှန်းချက် များဟာ
လူလူချင်း တူညီသော ဝါဒသို့မဟုတ်
အဲဒီဝါဒ နဲ့နီးစပ်ပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
အဲဒီသိသိသာသာဟာ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ဟာ
ည နေ ပိုင်းဝင် ငွေများကို မူမတည်ပါဘူး
အစစ်အမှန် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီများ လျော့ချတဲ့ သီးသန့်ချမ်းသာ မှုအားကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဖြစ်နိင် ဖွယ် ရာ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရေးကို လုပ်ငန်းအရာ တွေကို အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ် အဲဒါက ဘာ့ကြောင့်လဲဆို တော့ ဆု ရှယ်လစ် ရည် မှန်းချက် ဟာ ပစ္စည်းများကို စုဆောင်းဖို့ ရန် နဲ့ ကိုယ် ရေးကိုယ်တာ စု ဆောင်းမှု မဖြစ်စေဖို့ 
ဖြစ်ပါတယ် ဆို ရှယ်လစ်ဝါဒဟာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းသိူ့အလိုလိုချိတ်ဆကိ ပေးင်္ပြီးကွန်မြူနစ် ဝါဒသို့ရောက် ရှိစေပါတယ် နောက်သူ့အလ်ုလို ဖိနိပ်ချုပိချယ်မှု အားလုံးဟာ ပြီးဆုံးသွားပါတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညီမျှခြင်းကို သုံးပြီး ပုံမှန် အ တွေးအ ခေါ် လူအများစုဟာ အများစုအမြင် အာရုံခံစားမှု အ စောကြီးကတည်းက ပြသခဲ့ပါတယ် အဲဒီမှာ အောင် မြင် သူများအ နေ နဲ့ ရှုံနိမ့်သူများဟာ မည်သည့်မည်မျှ ထုတ်လုပ် ခြင်းများမှာမဆို ရှိပါတယ်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ ထုတ် ဝေခြင်း အောက် မှာ ဝင် ငွေဟာ ပိုမိုထွက် ပေါ်လာပြီး
ပထမကမ္ဘာက လူတွေဟာ ဆုံးရှုံခြင်းကို
ခံစားရ မှာဖြစ်ပါတယ် စစ်မှန် တဲ့ဆို ရှယ်လစ် စနစ် အောက် မှာ ညီမျှခြင်း ဟာ တန်ဖိုးရဲ့
ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ ထုတ် ဝေခြင်းသာမဟုတ်ပါဘူး ဆို ရှယ်လစ် ဝါဒဟာ
ဖယ်ထုတ် နေ တဲ့ပန်းတိုင် ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်မှု သာ ရှိပြီး ဓန ရှင် လူတန်းစားတွေဟာလည်း အဲဒီအတိုင်းပါ ရှိပါတယ် တခြားစကားနဲ့ ပြောမယဆ်ို ရင် ဆို ရှယ်လစ် ဝါဒ လက် အောက် မှာ ပထမကမ္ဘာကလူတွေဟာ သူတို့ချမ်းသာတာထက် ပိုမိုဆုံးရှုံးခဲ့ ရပါတယ် သူတို့ တွေဟာ သူတို့ဘဝ တွေကို အရှုံးဘက်သိုိ့ပြန် လှည့် ရပါမယ်
ဆို ရှယ်လစ်ဝါဒီမှာ ညီမျှမှု ရဲ့ အ တွေးအ ခေါ်တစ်ခု ဟာ အမြဲတမ်းချည် နောင် ထားပါတယ်ပိတ်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အဖြစ်
ချမ်းသာမှုကို မည်မျှကဲ့သို့အ ခြေ ခံထားပါတယ် နယ်ချဲ့ဝါဒီတု့် ရဲ့ ဝေဖန် မှု
သာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ့စနစ် အရ တချို့နိင် ငံ တွေမှာ တခြားနိင် ငံ တွေ ရဲစရိတ် အရ
ချမ်းသာမှုနဲ့ စွမ်းအင် တွေ ရှိပါတယ် စစ်မှန် သောမက်စ်ဝါဒီများဟာ ညီမျှမှုကို ထောက် ခံ သော နိင် ငံ တွေ ရဲ့ ညီမျှ မှု တွေ ရှိ နေကြတယ်ဆိုတာပါ ထောက် ခံဖို့ ပြုလုပ် ဖို့ ရန် နိင် ငံများရဲ့ တစ်ဖက်သတ်လီနင် စိတ် ဓာတ် ကြံ့ခိုင် ခြင်းအတွက် ထောက် ခံမှုကို
ပြောင်းလဲမှုမှ တဆင့် ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ် အဲဒါဟာ ညီမျှ မှု ဘေးမှာ ဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပါတယ်
ဆိုဗီယက် ယူနီယံ ကြီးက ပြန်လည် ပြင် ဆင် ရေးသမားတွေ ကြောင့် ပြိုလဲသွားပြီး
သူတို့ကိုယ်တ်ုင် အရင်း ရှင် ဝါဒီတွေဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
လီနင် ရဲ့အလံဟာ အသစ်သောအမြင့်သို့ မော့် ရဲ့အကူအညီအရ မြင့် တက်လာခဲ့ပါတယ် မော့်ဝါဒီဟာ နယ်ချဲ့ဝါဒီ တွေ ဆို ရှယ် အရင်း ရှင် ဝါဒီတွေ မျက်ကန်းမျိုးချစ် တွေ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးခြင်း
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ မလိုလားမှုကို အပြစ် တင် ခဲ့ပါတယ် မော့်စ်ဝါဒီဟာ ကမ္ဘာဟောင်းကြီးရဲ့ အစီအစဉ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့ ရန် နဲ့ အဲဒီ နေ ရာမှာအသစ်တစ်ခုနဲ့  အစားထိုးပြောင်းလဲဖို့ ရန် ပြည့်စုံ ရှင်းလင်းသော အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်
အဲဒါဟာ ချင် ဘိုဒါနဲ့လင် ဘိုင် အို တု့ဖြစ်ပြီး သူတို့ တွေက မော့်စ်ဝါဒီကို မော့်စ်ဝါဒီအဖြစ် ရှင်းလင်း ပြတ်သားစွာပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ချင် ဘိုဒါ ရဲ့
အ တွေးအ ခေါ် ဟာကမ္ဘာလုံး ပြည်သူတွေ ရဲ့ ထိပ်တန်း ရှေ့ဆုံးမှာပါဝင် ပြီး အဲဒါဟာ
ဆင်း ရဲတဲ့နိင် ငံများမှ ချမ်းသာတဲ့နိင် ငံများဆီသ်ို့ပြန်လည်ဆန်းသစ် ထားပါတယ်
မော့်စ်ဝါဒီဟာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အချက်ကျကျ နားလည် မှုကို ပြန်လည် ဆန်းသစ်ပြုပြင် ထားပါတယ် ဒါ ပေမယ့် အဲဒါဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင် ရာ ပြည်သူ့စစ် နဲ့
ဆို ရှယ်လစ် ဝါဒီတွေက်ို သန့် စင် ပေးပါတယ် ဆို ရှယ်လစ် ထုတ် ဝေဖြန့် ဖြူးရေး ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ တစ်ခုတည်းသော အရာဖြင့် ချမ်းးသာကြွယ် ဝမှု နဲ့ စွမ်းအင် ရဲ့ မည်မျှမှုကို အမှားကို ပယ် ပေးပါတယ် အဲဒါ ဟာ အခု လက် ရှိ
ခေတ်စားတဲ့လက် အောက် မှာ ရှိပါတယ်
ဆို ရှယ်လစ် ဝါဒီဟာ အမြဲတမ်း လက်သီးပုန်းမ မထိုးပါဘူး အမှားများပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်
ဆင်းရဲတဲ့ အစီအစဉ်များဟာ တည် ရှိ နေပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မတူညီမျှမှုဟာ နယ်ချဲ့ဝါဒီတို့လက် အောက် မှာသာတည် ရှိပြီး အဲဒီမတူညီမှုတွေဟာ ဝေးကွာတဲ့ နေ ရာတစ်ခုက လာတာဖြစ်ပြီး အဲဒါဟာဆို ရှယ်လစ် ဝါဒီလက် အောက်မှာ အဆ်ုးဆုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် အဲဒီမတူညီမှု တွေကို မပြုပြင် ဘူးဆို ရင် မညီမျှဘူးတွေဖြစ်လာပြီး အဲဒါဟာဆင်းရဲတဲ့နိင် ငံ တွေ့ကို အကျိုးသက် ရောက် စေမှာဖြစ်ပါတယ် ညီမျှမှု ယေဘုယျ အဓိပ္ပာယ်တစ်ခု အ နေ နဲ့ ဆို ရှယ်လစ် ဝါဒီတွေဟာ ညီမျှမှု ဖြစ် စေရန် အရမ်းဆန္ဒပြင်းပြ ပါ တယ် ထို့ ကြောင့် စစ်မှန် သေူ ကွန်မြူနစ် တွေဟာ ပထမကမ္ဘာက လူတွေအားလုံးကို လျစ်လျူရှု ရပါမယ်
ပထမကမ္ဘာဟာ ဆို ရှယ်လစ်ဝါဒ တစ်ကမ္ဘာလုံးကျယ်ပြန့်လာမှာကုို ရုးရှင်းစွာ သ ဘောမကျပါဘူး ပထမကမ္ဘာဟာ အောက် ခြေ အများစု အတွက် က တော့
အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေ တည် ရှိပါတယ် ဆို ရှယ်လစ် ဝါဒ အောက် မှာအဲဒါဟာ လျော့နည်းဖို့ ရန် အမည်ခံပါတယ် အဲဒါ့ကြောင့် ပထမကမ္ဘာကအလုပ်သမားများဟာ
တတိယကမ္ဘာမှ လူကြိုက်များသောအစိတ် အပိုင်းတွေကိုဆန့်ကျင် ပြီး သူတို့ပိုင် တဲ့ ဓန ရှင် လူတန်းစား နဲ့အတူ အမြဲပေါင်းစည်း နေ ပါတယ် ပထမကမ္ဘာကအလုပ်သမားများဟာ နယ်ချဲ့ဝါဒီတွေ ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပုိုင်းအဖြစ် ရပ်တည် နေပါတယ် အဲဒါ ဟာပထမကမ္ဘာက အလုပ်သမားများက်ု အရင်း ရှင် တွေရဲ့အစ်ိတ်အပိုင်းတစ်ခု အဖစ် ရှုမြင် သင့် တဲ့ အ ကြောင်းပြချက် တစ်ခုပါ ပထမကမ္ဘာက လုပ်သားများဟာပစ္စည်းမဲ့တော်လှန် ရေးရဲ့ လူမှု ရေးအ ခြေ အ နေတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တွေဟာ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းးစားမဟုတ်ကြလို့ ပါ
သူတို့ဟာ ဆင်းရဲ တဲ့အစိတ်အပိုင်းလည်းးမဟုတ်သလို တော်လှန်ရေးရဲ့ အပိုင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး ပထမကမ္ဘာက အလုပ်သမားများဟာတစ်ခါတစ် ရံ တတိယကမ္ဘာမှ အရင်း ရှင် တွေထက် တောင် ပိုမိုအခွင့် အလမါးရှိကြပါတယ် မက်စ် ရဲ့ တော်လှန် ရေးရဲ့ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားအ ခြေ အ နေဟာ
ဘာဆို ဘာ မှ မရှိ ရပါဘူး ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ အတိုင်းအတာ တစ်ခု တော့ရှိပါတယ် အဲဒါက အလုပ် တွေကို ပြလုပ်ဖို့ ရန် သူတို့တွေ ရဲ့ အလုပ်လုပ်မှုကို ရောင်းချဖို့ ရန် ဝန် မ လေးသူများဖြစ် ရပါမယ်
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားဟာ အရင်း ရှင် ဝါဒလက် အောက် မှာ တန်ဖိုးရဲ့အဓိကအချက် အချာဖြစ်ပါတယ် ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့မက်စ် ရဲ့ သရုပ်ဖော်ချက် ဟာ ပထမကမ္ဘာကအလုပ်သမားကို ပြင်းထန်စွာထုတ် ဖော်ပြောဆိုပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါကတတိယကမ္ဘာမှ မြောက် မြားလှစွာေ သာ လူတွေက်ုဖော်ပြပါတယ် မက်စ် ရဲ့ဖော်ပြချက် ဟာ အ ခြေ အတင် ငြင်းခုံလို့ မဖြစ်သေးပါဘူး အဲဒီသူပုန် တွေ အဲဒီစနစ် တွေဟာ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ် ပထမကမ္ဘာမှ လူမှု ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အဲဒီမှာ လူမှုအဆင့် အတန်းကို ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် ဒိမှာ ကောင်းမွန် သော လျှို့ဝှက် ဇာတ်လမ်းဆိုတာ
မရှိပါဘူး ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနစ်က မြောက်များလှစွာသော
တော်လှန် ရေးတွေဟာ တတိယကမ္ဘာမှာ မျက် မြင် ကိုယ် တွေ့ ရှိခဲ့ပြီး ပထမကမ္ဘာမှာတော့လုံးဝ မရ်ှခဲ့ပါဘူး
ထို့ ကြောင့် ပထမ အ ရေးကြီးသော မော့်ရဲ့ မေးခွန်းဟာ ဖြေပြီးခဲ့ပါပြီ
ပြန်လည်ပြင် ဆင် ရေးဝါဒဟာအလွန်အားကောင်းပါတယ် ဆိုဗီယက် ယူနီယံဒါမှမဟုတ် တရုတ်ပြည်မှာပါစိတ် ဓာတ် ရေးရာ အောင် နိင် သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် အရင်းရှင် ဝါဒဟာ ပြန်လည်တိုးတက်လာပါတယ်
အဲဒါဟာဆို ရှယ်လစ်ဝါဒီ နောက်ပြန် ဘွဲ့နင့်
အရင်းရှင် ဝါဒကို ပြန်လည်အသက် သွင်း
တဲ့ရန်သူ တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ် သကြားဟာ
ကျည်ဆံကို အရမ်းအန္တရာယ် များဖို့ အတွက် ကို သက် သေပြဖို့အတွက်လိမ် ခဲ့ရပါတယ်
မော်လိုချင် သ လောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ပြန်လည် ပြင် ဆင် ရေးဝါဒဟာ မက်စ်မတိုင် ခင် က ကောင်းမွန် သော ခေါင်းဆောင် မှု တ်ု့ ၏အပြစ် ရှာခြင်းကိ ခံခဲ့ရပါတယ် လီနင် က ဒုတိယနိင် ငံ တကာပြန်လည်ပြင် ဆင် ရေးသမားတွေ ကို သူတို့ တွေရဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ် အတွက် အပြစ် တင် ခဲ့ပါတယ် ဒုတိယနိင် ငံတကာ ရဲ့ပြန်လည် ပြင် ဆင် ရေးသမားတွေဟာ နယ်ချဲ့ဝါဒီ မလွဲတုိ့ကို အဲဒါ တွေက အလုပ်လုပ် နေ တဲ့ အပ်ုင်းရဲ့ သူတ်ု့ရဲ့ တခြားနိင် ငံ တွေရဲ့ အ ရှေ့အခြမ်းကို အလုပ်လုပ် တဲ့အခါအားပေးခဲ့ပါတယ် ယှဉ်ကြည့်မှု အရ လီနင် ဟာ ကမ္ဘာလုံးပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစား
ကို ရှုမြင် သုံးသပ်ချက်ပါ လီနင် ဟာ သူ့နိင် ငံ
ရဲ့ တိုင်းပြည် ရဲ့ အရှုံးကိုထောက် ခံပြောဆိုပါတယ် ပြီးတော့နယ်ချဲ့ဝါဒီ တွေ ရဲ့စစ်ပွဲက်ု အဆုံးသတ် စေခဲ့ပါတယ် ပထမကမ္ဘာကလူ တွေက်ု လီနင် ဟာဆိုရှယ် နယ်ချဲ့ဝါဒိ တွေနဲ့ ဆို ရှယ်ဖက်ဆစ် တွေလိူ့အခု လက် ရှိသူ့ရဲ့ ပြန်လည် ပြင် ဆင် ရေးသမားရဲ့ နေ့ တွေမှာ ခေါ် ဝေါ်ခဲ့ပါတယ် ဆို ရှယ်လစ် ဝါဒရဲ့ နာမည်နဲ့
ပြန်လည် ပြငဆင် ရေးသမားတွေဟာ
အရင်း ရှင် တွေ ကို အားပေးထောက် ခံ နေ ပြီးယခု လက် ရှိ ပထမကမ္ဘာသားတွေ လုပ် နေ တဲ့အတိုင်းပါဘဲ ပထမကမ္ဘာသားတွေဟာ သူတို့ တွေရဲ့ချမ်းသာကြွယ် ဝမှုထက် ပိုမိုလက် ခံပြီး တတိယကမ္ဘာမှာ ရှိတဲ့ တခြားနိင် ငံ တွေ ရဲ့စရိတ် တွေနဲ့ တိုးတက်ဖို့ ရန် ရှာ ဖွေခဲ့ပါတယ် ယှဉ်ကြည့်မှု အရ အလင်းရောင် ဆောင် ကျဥ်းပေးလာသူ ကွန်မြူနစ် ဝါဒဟာ ဖိနိပ်ခံ ရုန်းကန် နေ ရတဲ့အများစုကိုယ်စားကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်
အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးလာသူ ကါန် မြူ ဝါဒဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့အစစ် အမှန် ဆ်ုတာဘာလဲဆိုတာ ရှင်းပြ ပေးမှာပါ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ထိပ်ဖူးဟာ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရဲ့
ပြည်သူစစ် ရဲ့ ထိပ်ဖျားမှာ ရှ်ိပါတယ် အလင်းရောင် ဆောင် ကျဉ်းပေးလာသူဟာ
အဲဒီနည်းအတိုင်း ရှေ့က်ို ချီတက် မှာပါ
Category : စီးပွားရေးများ/Economics, သီအိုရီ/Theory
← အားဟောင်းအားသစ် တော်လှန် ရေးကိုအားသစ်သွင်းပါတယ်
ဘော်ရှီဗစ်တော်လှန် ရေးရဲ့ နစ်ပတ်လည် နေ့ →